China Impumelelo iimbasa mveliso kunye nabenzi | UKumkani
Jonga ukhetho lwethu lweeMedical Achievement, nokuba yeyiphi na impumelelo iMedical Achievement ngumvuzo ogqibeleleyo. Uluhlu lwethu lweembasa zeMpumelelo lubandakanya igolide, isilivere kunye neembasa zokuphumelela zobhedu kunye neeMpumelelo zeBheji.
Qengqa ikhaphethi ebomvu kwiiMedali zethu zeSitampu seMpumelelo, iRibhoni zeMedali, iiMeko zeNtetho, iiNdebe, iiNdebe kunye neeMbasa zonke ngamaxabiso asezantsi kakhulu. Igolide yesilivere kunye neembasa zeBronze ezifanelekileyo kulo naliphi na ithuba lokunikezelwa kweMinyhadala yamaBhaso, ukwamkelwa kweZiko, ukuBoniswa kweSikolo okanye ukuwonga naliphi na ilungu leqela amabhaso ahlukeneyo. Sikwanokukhetha okuhle kweedibhoni zeMedali ezikumgangatho ophezulu ngaphezulu kwendibaniselwano yemibala eyahlukeneyo engama-60 ukusuka kwiRed, White kunye neBlue ethandwayo. Amatyala ethu okuNikezelwa kweMedali yindawo entle yokugqibezela ekhoyo kwimibala eyahlukeneyo.
Yonke into ebhalwe ngokulula ngokuCocwa kwePleyiti yoMthi okanye iiFakelo eziPrintiweyo zaSimahla kunye noyilo lwakho okanye ilogo.
Sikwabonelela ngeeMedali zangokwezifiso, izikhonkwane zeLapel kunye neebheji, iRibhoni kunye neeNdawo zeNtetho ezenziwe kuyilo lwakho ngamaxabiso asezantsi kakhulu.
Hlonipha abo basebenza nzima kwaye bafeze iinjongo zabo ngeMedical Achievement Medal evela kwi-K2 Awards! Sinento yonke evela kwigolide, isilivere kunye nebronze okanye imbasa eqaqambileyo yemibala, konke kulula ukwenza ngokwezifiso. Iimbasa zethu ziza nokukhetha kwakho iribhoni eqhotyoshelweyo kwaye, okongeziweyo okuncinci, ukukrolwa okwenzelwe wena ngasemva. Faka iimedali ziyafumaneka ngokhetho lwakho lokufaka isitikha esibonisa indawo ezininzi zempumelelo kwezemfundo nakwezemidlalo. Ngaba ufuna ukusebenzisa uyilo lwakho? Layisha nje uyilo lwakho kwaye uya kufumana ubungqina kuyilo ngaphakathi kweeyure ezingama-24 zeshishini. Xa usebenzisa izaphulelo zethu ezininzi, ungathenga ngakumbi kwaye ugcine!
Egqithileyo Iphini yokuncamathela kwebala
Okulandelayo: IIMBALI ZOLWAZI